Xagjirnimadu Diin kuma xirna (Warbixin) | Hadalsame Media
Home Wararka Xagjirnimadu Diin kuma xirna (Warbixin)
Xagjirnimadu Diin kuma xirna (Warbixin)
(Muqdisho) 19 Maarso 2019 – Todobaadkii la soo dhaafay maalintii Jimcaha aheyd ayaa waxaa dunida ka dhacay Gumaad loo geystay Dad Muslimiin ah oo markaasi ku cibaadeysanayay Masjid ku yaalla Dalka New Zland, kaasi uu sameeyay nin Cadaan ah, asal ahaana ka soo jeeda Wadanka Australia oo watay Qori iyo Rasaas badan mar uu weeraray laba masaajid, kuna dilay dad badan kuna dhaawacay kuwa kale, waxaana Ninkaasi lagu magacaabaa Brenton Tarrant oo ah 28 ayaa maxkamada la soo taagay isaga oo gacmaha ka xiran, sidoo kale xiran dharka maxaabiista ah, Ninkan ayaana la sheegay in indhaha ku gubayay Saxafiyiinta iyo Dadkii kale ee Maxkamada joogay.
Raisul Wasaaraha New Zealand Jacinda Ardern ayaa arbacadii ku soo laaban doona Magaalada Christchurch mar labaad tan iyo markii weerarkii argagixiso ee todobaadkii hore lagu qaaday laba Masjid.
New Zealand waxay si deg deg ah ugu socotaa hoggaaminta Arderna si ay uga jawaabto waxa ay ugu yeerayso “falalka ugu xun ee argagixisada” taariikhda jasiirada Pacific Island.Ardern waxay sheegtay in weerarrada – ay dileen 50 qof ayna ku dhaawacmeen daraasiin dheeri ah – ay muujiyeen daciifinta sharciyada qoryaha ah ee ay xukuumaddu wax ka qaban doonto dib u habeyn lagu sameeynayo 10 maalmood gudahood.
“Waxaa jira su’aalo xaqiiq ah oo ku saabsan sida tani u dhici karto halkan,” Ardern ayaa sheegtay Talaadadii markii uu cinwaanka ugu horreeyay ee Baarlamaanka laga soo bilaabo weerarka, Waxaa jira caro ah in ay halkaan ka dhaceen, waxaa jira su’aalo u baahan in laga jawaabo lana hubiyo inay noqon doonaan.”
Xubnaha Baarlamaanku waxay isugu soo uruuriyeen Golaha Talaadada manta ah, si ay u wadaagaan tacsida dhibanayaasha. Waxay mar kale ku kulmi doonaan Arbacada berritto ah, isla maalintaas Ardern waxay doonaysaa inay ku laabto Christchurch.
Ardern ayaa sheegtay in ay la kulmi doonto qoysaska ugu horreeya iyo qoysaska dhibbanaha Arbacada markii ay u diyaar garoobaan aaska.
Sabtidii, waxay booqatay xubno ka tirsan bulshada muslimiinta Christchurch iyadoo xiran xijaabka , islmarkaana Xabadka saareysay Dadkii laga geeriyooday, taasoo soo jiidatay indhaCaalamka, waxaana laga dheehan karay inay muujisay ficil macno leh oo naxariis iyo ixtiraam leh.
Argagixisada Al-shabab ayaa waxay cambaareeyeen weeraradii argagixiso ee NewZealand, waxaase la yaab leh iyagoo ah kuwa mar walba u taagan daadinta dhiigga dadka Muslimiinta ah. Tusaale ahaan Maalin kaliya ayay qarax ku dileen in ku dhow 500 oo qof oo Muslimiin ah! Waxaana ka mid ah Qaraxii Zoppe, waxaana arrintaasi ka hadlay Shiikh Maxamuud Maxamed Shible, isaguu xusay in Kooxda Alshabaab u sheegay inay iska daayaan daadinta Dhiigga Musliminta, islamarkaana ay u naxaan Muslimiinta.
Argagixisadu Diin kuma xirna, waxaana loo baahan yahay in loo Midobo la dagaalankeeda, iyadoo Falkii Argagaxisnimo ee ugu dambeeyay waxa uu ka dhacay Dalka Newzland kaasoo uu geystay Nin Cadaan ah oo u dhashay dalka Australia, wuxuuna laba masaajid ku kala dilay in ku dhow 50 Ruux, marka sow ma aha Argagaxisanimadu Diin kuma xirna.
Previous articleWararkii ugu dambeeyay ee degmada Balcad iyo ciidamada dowladda oo dib u qabsaday
Next articleBrexit oo ur u bixi la’yahay & Wasiirad Faransiis ah oo bisadeedda ugu magac dartay!